トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul sehatra dingana fahefatra "sy ny mpihazakazaka chaser (fotoana mangina, vanim-potoana stagnation)" ary
Amin'ny alalan'ny fomba tena
mahazo kambana Seoul [3500 Yen Free fanombanana] amin'ny hoavy dia sehatra fito, tena ao amin'ny dingana ho amin'ny ho fused ho iray ny fanahy, ny dingana fahefatra dia tena maharary vanim-potoana dia mety ho tonga. Ao amin'io dingana, satria roa ny fisarahana ho avy.
mafy fifandonan'ny planeta ao amin'ny dingana fahatelo, rehefa avy niaina ny fanaintainana lalina amin'izy samy izy, ny iray dia fanampiana ho tsy nahatohitra ny fanaintainana, sy ny fikorontanana fa ny hafa dia tampoka ho any amin'ny antoko hafa, ka hanenjika ny mpanohitra I.
lavitra izany, tsy manana hitakemotra raha mbola tsy manary ny hambom-pon'ny izay nahatonga ny ady ao amin'ny faharoa ny dingana fahatelo. Indraindray, izany ihany koa izay mety hanohy ny fisarahan'ny ny fanjakana noho ny somary lava ny fotoana ananany.
Fa ny tena hevitry ny dingana io dia tsy mba mitandrina ny lalana mba hifikitra amin'ny antoko hafa izay lasa indray mandeha, aho, toy ny mikendry mba fifohazana ara-panahy mba hanatsarany ny tenany. Na izany Kizukeru vokany, dia ho lehibe ny fahefatra fitsapana ny sehatra.
hambom-pon'ny sy ny foto-kevitra, raha manenjika kokoa izy handeha Twin Seoul ny fifandraisan'izy
? mpihazakazaka sy ny chaser
izay voangony eo amin'ny fiainana sy ny fitiavana traikefa ny lasa Chase, dia miteraka be dia be ny fand?vana. Avy eo, ny fihetseham-po sy ara-tsaina natao ho amin'ny fanjakana miovaova mafy, nefa tsy mba toy izany izay mand? mafy ny mpanohitra.
Ho vokany, dia samy namely ny tebiteby, ary misalasala ny samy hafa, koa dia tsapako ny fanaintainana mahery ny mpifanandrina. Raha tsy maharitra hatramin 'izany, ny iray dia ny miezaka ho afa-mandositra avy ao amin'ny fifandraisana. Ary, iray hafa izay nandositra hiala eo anoloan'ny maso ny tampoka, dia katsaho fatratra miezaka indray sao mpanohitra. Ao amin'io fifandraisana, izay tsara kokoa ny mandositra ny mpihazakazaka, dia katsaho dia ho antsoina hoe ny chaser.
? fijaliana efa nandositra nankany
mpihazakazaka mba hitondra any amin'ny fifohazana ara-panahy chaser Tsy ho lasa sahiran-tsaina tsy mahafantatra ny zava-nitranga. Ary, mpihazakazaka narrowing mihevitra aho, aoka izy hand? ny tenany, dia mora, na hanome tsiny ny Dari lolompo manohitra ny mpanohitra. Ny fanjakana no tena mafy, dia mety ho izay zaka.
Na izany aza, raha tena olona roa dia kambana fanahy, ny mpihazakazaka tsy manana noho ny nandositra satria lasa fankahalana zavatra chaser. Raha mbola tia tena, mahatsapa ny tahotra mba handini-tena fa tsy mahalala ny chaser, ianao efa nandositra. Koa satria ny fifandraisana dia zavatra ny fanahy haavon'ny, fa tsy zavatra mety ho nihevitra fa miezaka hanatsara.
Noho izany, Chaser, tsy maintsy manary indray mandeha no mieritreritra be ny mpihazakazaka. Ary, raha mitombo ny mandamina ny tenany, isika afa-mandray ny fifohazana ara-panahy.
ao amin'ny fisarahana
fahefatra dingana rehefa mifoha amin'ny samy izy amin'ny alalan'ny ny fe-potoana, indray nandinika ny tenako amin'ny alalan'ny niala dia samy izy, no azo lazaina ho tena vanim-potoana mba hampitombo ny mba ho afaka ny ho tia ny tenanao. Raha Norikoere fahoriana mafy io, dia azo atao ny mahazo fifohazana ara-panahy amin'izy samy izy, ary tonga ho amin'ny tany aho tamin'ny farany ho afaka ny hiroso amin'ny dingana manaraka ny kambana fanahy.
Raha isika, dia afaka handray ny fifohazana ara-panahy.